Nhau - Mhinduro kumibvunzo nezve chaiyo chishandiso chimuvhu
1. Ndeapi mhando yemidziyo iwe yaunofanirwa kushandisa iyo etching kufa?
A: zvinoenderana nechigadzirwa uye zvinhu zvehunhu. Zvigadzirwa zvinogona kuenderera zvichirohwa zvinogona kushandisa otomatiki kufa-yekucheka muchina (ine zvikamu zvinowirirana), senge: -maviri-mativi ekunamatira tepi, jira rekuparadzira, reflector inoshandiswa mune zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi; rimwe chigadzirwa dhipatimendi rinoshandisa Hardware punch, hydraulic punch, bhiya muchina webara bhokisi, reruoko desktop desktop.
2.Maitiro ekugadzira chishandiso chimuvhu uye matanho?
Mhinduro: kazhinji zvinoenderana nevatengi vanodhirowa uye vanodhirowa (1: 1) kugadzira chishandiso chimuvhu. (kana iko kudikanwa kwekukosha kusiri kwepamusoro, masampuli anogona kupihwa). Ukobvu uye hunhu hwechinhu chakatemwa nemutengi chinogadzira maitiro ekugadzira efa (senge: banga kukwirira, banga rimwe chete rerutivi, banga rakakwirira uye rakadzika, banga rechipiri induction banga, nezvimwewo).
3. Iko kugona kwekugadzira uye kukura kwechigadzirwa chishandiso?
Mhinduro: chishandiso muforoma inogona kuita ese marudzi asina kujairika magiraidhi, uye chigadzirwa kushivirira kunogona kuve kwakaringana mukati me ± 0.03mm. Inoshandiswa zvakanyanya mukuchinja-chinja wedunhu bhodhi, midziyo yemumba, nharembozha, zvikamu zvemota, zvigadzirwa zvemadhijitari, kudhinda nekupakata indasitiri, zvigadzirwa zvepurasitiki, gasket yemagetsi, matoyi emadhora, yekuzvinamatira uye mimwe minda. Yedu yekambani 24-awa mashandiro maitiro anovimbisa iwo mhando uye kugona, uye inovimbisa pane-nguva kuburitsa.
4. Iko kutenderera kwekugadzirwa kwechigadzirwa chishandiso?
A: kana iri yekukurumidza kurongeka, zvinoenderana nehukuru hwechigadzirwa, iko kutumirwa kunogona kurongwa nekukurumidza kana maawa mana mushure mekugamuchira iwo odhi (iyo kotesheni simbiso inotumirwa kumashure). Mumamiriro ezvinhu akajairwa, izvo zvinhu zvinogona kuendeswa zuva rinotevera.
5. Iko kugona kwekudzika kudzora kubaya nechokushandisa kufa?
Mhinduro: chishandiso kufa kucheka bvunzo kuvhara basa bvunzo zvinhu kugadzirisa dambudziko, ruzivo rwunoona chigadzirwa chigadzirwa. Iyo yakakwira kukwirira kwekucheka kufa kunogona kuva 2mm. Kana chigadzirwa chacho chakanyanya kuomarara uye chakaoma, gomba rekuvhara rinovhurwa uye gwanza rakamanikana, hazvikurudzirwe kushandisa chishandiso chichigadzirwa, asi kushandisa chishandiso chishandiso chimuvhu. Iyo rakakanganisika banga reyecheche chishandiso muforoma harigone kugadziridzwa, uye iro rekutemera chishandiso muforoma rinogona kudzokororwa kugadziriswa.
6.Kugadzira kugona uye chiyero chekushandisa kwekutemera chishandiso chimuvhu?
A. iyo yekuveza chishandiso kufa inogona kushandiswa kutsikisa gobvu zvinhu uye kutumira kuomarara (senge EVA furo, chipanje, ese marudzi epurasitiki firimu, mica jira, inodzivirira zvinhu, nezvimwewo. rimwe chete banga banga uye 0.6 mm yekuvhara gomba. Yakakwirira uye yakadzika banga, rimwe chete banga banga, dzakasiyana banga kukwirira (senge 8mm zvinhu) inogona kuve 5mm kana kukwira. Chinhu chikuru chakanakira ndechekuti nguva dzekutsika dzakakwira uye iro banga rinogona kugadziriswa yakatenderera.
Dongo-Kudonhedza Kudonhedza Michina Inofa, Simbi Yakafa Kunyora, Auto-Chinyorwa Kuzadza Chinyoro Kufa, Mirror Surface Inotema Die, Laser Kufa, Mask Michina Die,